Sonita Ampolony No Voalaza Fa Novonoin’i Iran Hamoretana Ireo Gadra Noho Ny Fieritreretana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2016 11:04 GMT
Gadra politika Kiorda Shahram Ahmadi voalaza fa notapahan-doha tamin'ny 2 Aogositra 2016. Sary nindramina avy amin'ny Hetsika Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'Olombelona Ao Iran
Voalaza fa nanapa-doha gadra Sonita am-polony ny governemanta Iraniana tao amin'ny fonja Gohardasht, ivon-toerana malaza amin'ny fampijaliana gadra politika, anisan'izany i Shahram Ahmadi, gadra malaza noho ny fanehoan-kevitra. Voalaza fa nangataka mba hoavy any am-ponja ireo fianakaviana mba hanao veloma farany saingy rehefa tonga tany dia nentina tany amin'ny toeram-paty mba haka ny vatana mangatsiaka ny havany. Manamarika ny fitohizan'ny politika mahery setra amin'ny fikendrena ireo tsy mitovy hevitra ara-politika sy ny foko vitsy an'isa izao famonoana ho faty izao.
Gadra Sonita 36 farafahakeliny no nafindra toerana miandry ny famonoana ho faty ary manondro ny tatitra fa gadra 20 farafahakeliny no novonoina ho faty tamin'ny Talata 2 Aogositra, misy koa ireo tatitra sasany milaza fa mbola ambony mihoatra ny 29 ny fitambaran'ny olona novonoina. Fantatra fa nitokona tsy nihinan-kanina mba hanohitra ny famonoana ho faty ireo gadra Sonita ao Gohardasht ireo.
Nosamborina tamin'ny 2009 i Ahmadi, mpikatroka sonita sady foko Kiorda 30 taona. Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny Voice of America, nampahafantatra i Ahmadi fa natokan-toerana nandritra ny 33 volana izy.
Nandritra ny fisedrana azy, nifikitra tamin'ny tsy fananany tsiny i Shahram. Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny VOA, dia niresaka ny tsy fetezany hiaiky izy, nilaza hoe “novonoin'izy ireo ny rahalahiko; tsy manana na inona na inona mbola mety ho very aho. Ny marina dia tsy manan-tsiny aho, ary tsy tiako ny olona tsy hahafantatra fa tsy manan-tsiny aho alohan'ny hamonoana ahy ho faty. “
Araka ny Amnesty International, nandany telo taona latsaka kely tany am-ponja alohan'ny fitsarana tsy nahazo torohevitra na ny fifandraisana amin'ny fianakaviany i Ahmadi. Nandritra izany fotoana izany, dia tsy nitsahatra ny nampijaliana isan'andro i Ahmadi ary noterena hiaiky heloka amin'ny heloka bevava tsy nataony. Ny fitsarana dia voalaza fa naharitra dimy minitra, ary avy eo dia nambara taminy fa voaheloka ho faty izy noho ny “fandrafiana an ‘Andriamanitra” (na moharebeh noho ny filazana fa mpikambana amin'ny vondrona Sonita Salafista izy) — heloka notsipahiny. Ampifandraisin'ny manampahefana Iraniana amin'i Arabia Saodita hatrany izay vondrona Salafista fantany, iheverana azy ireny ho anti-Shiita ary avy amin'izany no anondroana azy ireny ho fahavalom-pirenena.
Tamin'ny Novambra 2015, nanambara ny loharanom-baovao akaiky an'i Shahram fa hoe: “Indrisy, nilaza ny Mpitsara Moghisseh fa ny heloka roa voalohany an'i Shahram dia noho izy Sonita sy ny maha Kiorda azy. Noho izany, dia heverina ho meloka izy hatramin'ny voalohany. “
Anisan'ireo mbola iharan'ny fanilikilihana eo amin'ny zon'y ara-pivavahana, ara-toekarena ary ara-kolontsaina ny Kiorda, iray amin'ireo foko vitsy an'isa maro ao Iran. Araka ny tatitra nivoaka tamin'ny 2012 navoakan'ny Minority Rights Group International [Vondrona Iraisampirenena Misahana ny Zon'ny Vitsy An'Isa], ambony kokoa ny tahan'ny fandraofan'ny manampahefana ny fananan'ny Kiorda miohatra amin'ny fandraofan'izy ireo ny fananan'ny vondrona vitsy an'isa hafa. Hitan'ny tatitra ihany koa fa tsy raharahian'ny governemanta ny faritra kiorda ao avaratra andrefan'i Iran.
Efa an-taonany maro ny fanjakana Iraniana no manao ho lasibatra ireo vitsy an'isa ara-poko sy ara-pivavahana, indrindra fa ireo niady hanana fizakan-tena. Mihatra amin'ny vitsy an'isa ara-poko tahaka ny Kiorda, Baloch, ary Arabo izany ary mihatra ihany koa amin'ny miozolomana sonita. Lavina matetika amin'ireo vondrona ireo ny mari-panondroana ara-kolontsaina sy ara-poko, miatrika fanavakavahana sy famoretana ara-andrimpanjakana eo amin'ny ambaratongam-piarahamonina Iraniana manontolo.
Mihazona ny mpikatroka mpandala ny zon'olombelona fa matetika ireo ampangaina noho ny heloka ara-politika ao Iran no tsy avela hiatrika fitsarana araka ny tokony ho izy, ary matetika no ampijaliana mba hahazoana fiaikena an-katerena. Tamin'ny 2015 i Iran no lohalaharana teto ambonin'ny tany amin'ny fanatanterahana famonoana ho faty miohatra amin'ny isan'ny mponina.
Ny zandrin'i Shahram antsoina hoe Bahram dia efa nosamborina tamin'ny 2009. Bahram dia anisan'ireo vondrona Sonita Kiorda sivy izay nomelohina ho faty tamin'ny Febroary 2011 noho ny “fandrafiana an'Andriamanitra,” vesatra mahazatra hiampangana ireo gadra noho ny fieritreretana ao Iran. Novonoina tamin'ny 2012 i Bahram Ahmadi. Araka ny nolazain'ny fianakaviany, nosamborina i Bahram raha vao 17 taona monja. Mbola mitoetra ho an'isan'ireo firenena vitsy eto ambonin'i tany i Iran amin'ny famonoana ho faty ireo tanora nanitsakitsa-dalàna.
Tao amin'ny taratasy iray mampihetsi-po tamin'ny fiandohan'ity taona ity ny renin'i Shahram Ahmadi no nangataka famindram-po hanavotana ny ain'ny zanany.
Inona no azoko atao amin'ny maha-reny tsy afa-mihetsika ahy? efa nahantona ihany koa i Bahram rahalahiny. Tahaka ny ahoana ny fahazakan'ny reny? Isan'andro sy isan'alina aho mitaraina amin'Andriamanitra ary mangataka Aminy hanomezany ahy ny fahafatesako.
Amin'ny maha-Silamo Sonita ahy, dia tsy mba henoina izahay [aty Iran]. Tsy izao va no notsongaina avy Imam Hussein an'ny Shiita: “Raha tsy mino ny fivavahana rehetra ianao [ary tsy matahotra ny Andro Fitsanganan-ko velona, farafaharatsiny aoka ho afaka eto amin'izao tontolo izao ity”? Misy zavatra azo anavotana ny zanakolahy. Ampy izay ny niainako, roa taona aho izay no tsy mahahetsika, tsy afaka akory mba mandeha any Tehran hitsidika ny zanakolahy [tany am-ponja]. Izaho no ahantony fa tsy ny zanako ary vitao ny zava-drehetra. Ny fahafatesana no tsara kokoa noho iity fiainana nomenao ahy ity. Tokony hahatratra ny faha-30 taonany ny zanakolahy, fa fahotana tahaka ny ahoana no hamonoanao mora ny zanakay tahaka izao? Mianiana amin'Andriamanitra tokana aho, indray andro any, tsy maintsy mamaly amin'ny ran'ireo tsy manan-tsiny[efa nalatsakareo] ianareo.
Ireto manaraka ireto ny anaran'ireo gadra 29 izay miatrika famonoana ho faty, ary anisan'ireny ireo efa mety ho novonoina tamin'ny talata 2 aogositra:
Kaveh Veisi, Behrouz Shahnazari, Taleb Maleki, Shahram Ahmadi, Kaveh Sharifi, Arash Sharifi, Varya Ghaderifard, Keyvan Momenifard, Barzan Nasrollahzade, Alem Barmashti, Pourya Mohammadi, Ahmad Nasiri, Edris Nemati, Farzad Honarju, Seyed Shahu Ebrahimi, Mohammad Yavar Rahimi, Bahman Rahimi, Mokhtar Rahimi, Mohammad Gharibi, Farshid Naseri, Mohammad Keyvan Karimi, Amjad Salehi, Omid Peyvand, Ali Mojahedi, Hekmat Sharifi, Omar Abdollahi, Omid Mahmudi, Abdolrahman Sangani, ary Seyed Jamal Seyed Musavi.